Apple Music Zvino Inowanikwa paEcho, Sonos uye Fire TV muAustralia neNew Zealand | Ndinobva mac
Apple Music yave kuwanikwa paEcho, Sonos uye Fire TV muAustralia neNew Zealand
Kuvhura masevhisi eApple kune mamwe mapuratifomu Inoenderera mberi nerwendo mushure mekuzivisa kwakaitwa nekambani Zvita apfuura, zvirinani zvine chekuita neApple Music, Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi iyo isingawanikwe chete paPambaPod, asi yakatangawo kuwanikwa paSonos, Amazon Echo uye Fire TV, zvakare kubva kuAmazon.
Kubva kupera kwaZvita, vashandisi veAmerica vanogona nakidzwa neApple Music pane ako maAmerican speaker kungofanana neAmazon set-yepamusoro bhokisi, Fire TV. Kubva Kubvumbi, mukana uyu inowanikwawo muUK neIreland. Uye nekutevera maitiro emutauro, zvino yave nguva yekuAustralia neNew Zealand.
Kwemaawa mashoma, vese vashandisi vane iyo Amazon Echo, Fire TV kana Sonos mutauri ikozvino unogona kumisikidza Apple Music kuburikidza nechinoenderana application kukwanisa kunakirwa neApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Nekuda kwekubatanidzwa uku, vashandisi vari munyika idzi vanogona kukumbira Alexa kuti iridze runyorwa rwe nziyo, dzakati nziyo uyezve ese masevhisi atinopihwa neApple Music.
Kunze kweAmazon, zvakare Samsung
Mazuva mashoma apfuura, vakomana veCupertino vakatanga yekupedzisira vhezheni yeTVOS 12.3 uye iOS 12.3 vhezheni inouya kubva muruoko rwezvinotarisirwa yakagadziridzwa 2018 uye 2019 Samsung TVs kutsigira AirPlay 2 kuwedzera kune kupa mukana weiyo TV app, chishandiso chinopa mukana weTunes Store uko kwatinogona kuroja, kutenga kana kuona mafirimu muraibhurari yedu.
Asi Samsung haizove yega, kubvira LG, Vizio uye Sony vakazivisawo kuenderana kwemamwe masevhisi Apple paterevhizheni, asi iyo yavanobvumirana nayo ndeyekushandisa kweTV. Iwe unogona kuona kuti Apple inoda kusvika kune vakawanda vashandisi sezvinobvira kuburikidza neayo ekushambadzira vhidhiyo sevhisi mukuwedzera mukusimudzira iTunes Mafirimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music yave kuwanikwa paEcho, Sonos uye Fire TV muAustralia neNew Zealand
Safari Technology Preview 82 inowanikwa kurodha pasi